နနျးဆုရတီစိုးနဲ့ ပထမဆုံး စတှတေဲ့နအေ့ကွောငျး သီခငျြးလေးရေးခဲ့ပွီး ခိုးပွီးငိုနရေတယျဆိုတဲ့ G Fatt – ShwePyiAye
By EditorPosted on May 28, 2020
ပရိသတျကွီးရေ .. Idol couple အဖွဈပရိသတျတှေ အားကခြဈြခငျခဲ့ရတဲ့ G-fatt နဲ့နနျးဆုတို့ရဲ့ အခဈြရေးဟာ မကွာသေးမီကာလတှကေ အဆုံးသတျသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ ။ ပရိသတျတှအေားလုံးက သဘောတူပွီး ပွနျတှဲစခေငျြနကွေပမေယျ့လညျး သူတို့နှဈဦးကတော့ နှဈယောကျထဲသိတဲ့အဆငျမပွမှေုတှအေတှကျ ရှဆေ့ကျဖို့မဖွဈနိုငျတော့လို့ အေးခမျြးစှာလမျးခှဲခဲ့တာပါလို့ အငျတာဗြူးတှမှော ဖွဆေိုခဲ့ကွပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ အငျတာဗြူးတှမှောတော့ မကျြရညျတှအေဝဲသားနဲ့ဖွဆေိုခဲ့ကွတဲ့ သူတို့နှဈဦးကွောငျ့ ခဈြရကျနဲ့ လမျးခှဲကွတာလားလို့ ပရိသတျတှကေထငျကွေးပေးနကွေပါတယျ ။ လတျတလောမှာတော့ လှနျခဲ့တဲ့ (၂၀၁၆)ခုနှဈ ဂြူလိုငျလ (၁၆) ရကျနကေ့ ပထမဆုံး အနုပညာတှဲလုပျခဲ့ကွတဲ့ အမှတျတရ ဓာတျပုံလေးရဲ့အောကျမှာ ဟိုးအရငျက ကြှနျတျောက သတို့သား သူမက သတို့သမီးလို ဝတျရိုကျထားတဲ့ ဓာတျပုံလေးကိုကွညျ့ကာ ခိုးပွီးငိုရငျး နောကျဆုံးတော့ G-fatt တို့ပဲ အငွိုးကွီးသလို ဖွဈဆိုတဲ့ နာရတဲ့ကဗြာ သီခငျြးထဲက သီခငျြးစာသားလေးကို ပွနျလညျရေးသားခဲ့တာပါ ။ ပရိသတျတှကေ ဝငျရောကျမှတျခကျြပေးကွတဲ့အခြိနျမှာတော့G-fatt က သူ့ရဲ့ Comment ကိုဖကျြသှားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ ။ ပရိသတျတှကေတော့ G-fatt တဈယောကျကို နနျးဆုကိုမမနေို့ငျသေးဘဲ ခဈြနဆေဲ ဖွဈမယျလို့ထငျကွေးတှပေေးနကွေတာလညျးတှရေ့ပါတယျ ။ ပွနျအဆငျပွစေခေငျြနတေဲ့ ပရိသတျတှလေညျး ရှိသလို ထပျမလှမျးသငျ့တော့ဘူးလို့ တားနကွေတဲ့ ပရိသတျတှလေညျးရှိနပေါတယျ ။
နန်းဆုရတီစိုးနဲ့ ပထမဆုံး စတွေ့တဲ့နေ့အကြောင်း သီချင်းလေးရေးခဲ့ပြီး ခိုးပြီးငိုနေရတယ်ဆိုတဲ့ G Fatt ပရိသတ်ကြီးရေ .. Idol couple အဖြစ်ပရိသတ်တွေ အားကျချစ်ခင်ခဲ့ရတဲ့ G-fatt နဲ့နန်းဆုတို့ရဲ့ အချစ်ရေးဟာ မကြာသေးမီကာလတွေက အဆုံးသတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ ပရိသတ်တွေအားလုံးက သဘောတူပြီး ပြန်တွဲစေချင်နေကြပေမယ့်လည်း သူတို့နှစ်ဦးကတော့ နှစ်ယောက်ထဲသိတဲ့အဆင်မပြေမှုတွေအတွက် ရှေ့ဆက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့လို့ အေးချမ်းစွာလမ်းခွဲခဲ့တာပါလို့ အင်တာဗျူးတွေမှာ ဖြေဆိုခဲ့ကြပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် အင်တာဗျူးတွေမှာတော့ မျက်ရည်တွေအဝဲသားနဲ့ဖြေဆိုခဲ့ကြတဲ့ သူတို့နှစ်ဦးကြောင့် ချစ်ရက်နဲ့ လမ်းခွဲကြတာလားလို့ ပရိသတ်တွေကထင်ကြေးပေးနေကြပါတယ် ။ လတ်တလောမှာတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ (၂၀၁၆)ခုနှစ် ဂျူလိုင်လ (၁၆) ရက်နေ့က ပထမဆုံး အနုပညာတွဲလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံလေးရဲ့အောက်မှာ
ဟိုးအရင်က ကျွန်တော်က သတို့သား သူမက သတို့သမီးလို ဝတ်ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးကိုကြည့်ကာ ခိုးပြီးငိုရင်း နောက်ဆုံးတော့ G-fatt တို့ပဲ အငြိုးကြီးသလို ဖြစ်ဆိုတဲ့ နာရတဲ့ကဗျာ သီချင်းထဲက သီချင်းစာသားလေးကို ပြန်လည်ရေးသားခဲ့တာပါ ။ ပရိသတ်တွေက ဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြတဲ့အချိန်မှာတော့G-fatt က သူ့ရဲ့ Comment ကိုဖျက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ။
ပရိသတ်တွေကတော့ G-fatt တစ်ယောက်ကို နန်းဆုကိုမမေ့နိုင်သေးဘဲ ချစ်နေဆဲ ဖြစ်မယ်လို့ထင်ကြေးတွေပေးနေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ် ။ ပြန်အဆင်ပြေစေချင်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေလည်း ရှိသလို ထပ်မလွမ်းသင့်တော့ဘူးလို့ တားနေကြတဲ့ ပရိသတ်တွေလည်းရှိနေပါတယ် ။
Previous post နှုတျခမျးစူစူလေး နဲ့ စကားတှပွေောနပေီဖွဈတဲ့ ဂငျြးကောငျကွီးရဲ့ သားခြောလေး မွတျသူ(ဗီဒီယို)
Next post အရာရာပကျြစီးပွီး ဘဝအသဈကိုပွနျစနရေတဲ့အခြိနျမှာတညျငွိမျနပွေီဖွဈကွောငျး ပွောပွလာတဲ့ ခမျြးခမျြး